I-Pitbull kunye noMariah Carey ukuqaqambisa umnyhadala we-2019 weCuracao North Sea Jazz Festival
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » I-Pitbull kunye noMariah Carey ukuqaqambisa umnyhadala we-2019 weCuracao North Sea Jazz Festival
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zeCuracao Breaking News • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Umbutho weCuracao North Sea Jazz Festival ubhengeza amagama amatsha namhlanje. I-Pitbull izakuvula kwiqonga likaSam Cooke ngolwesiHlanu, umhla wama-30 ku-Agasti nangoMgqibelo-uMariah Carey. Kukwangqinwa ukuba bazakudlala ngolwesiHlanu nguMaxwell, uMichael McDonald kunye noKenny G. Aloe Blacc noDavid Sanborn bongezwa kuludwe lwangoMgqibelo. Bajoyina iMaroon 5 eyabhengezwa ngaphambili, i-Ozuna, iGladys Knight kunye neLizwe lesiThathu. Umnyhadala uvula ngoLwesine, nge-29 Agasti ngeekhonsathi zasimahla zeHavana D'Primera kunye neAmyée Nuviola. Amatikiti ale ngokuhlwa aza kusiwa eSambil ngeCawa yesi-2 kaJuni.
UPitbull ngumlobi waseMelika, umvelisi kunye nombhali wengoma yemvelaphi yaseCuba evela eMiami. Ngo-2004, uPitbull wakhupha i-albhamu yakhe yokuqala iMIAMI, eyayibonisa kakhulu uLil Jon. Ukuza kuthi ga ngoku, ukhuphe ii-albhamu ezilishumi, eyokugqibela inguTshintsho lweMozulu ngo-2017. Kwi-albhamu yakhe ka-2015 uDale, uPitbull ufumene imbasa yeGrammy yeLatin Rock egqibeleleyo, iDolophu okanye enye iAlbhamu. Lilonke, uthengise ngaphezulu kwama-albhamu ezigidi ezi-5 kunye nee-60 eziingoma ezizigidi kwihlabathi liphela kwaye wafikelela kwinombolo 1 kumazwe ali-15.
Ukuba kukho nabani na ongadingi kwaziswa, nguMariah Carey. Imvumi yaphakama yaduma ngo-1990 kunye nomculo wakhe otshisayo we-Vision Of Love kunye ne-albhamu yakhe engaziwayo. Kwangoko ihlabathi lahoya, hayi nakancinci ngenxa yoluhlu lwezwi likaCarey le-octave ezintlanu kunye nokusayinwa kokusetyenziswa kwerejista yempempe. Waba ngumculi wokuqala ukuba ii-singles zabo zokuqala ezintlanu zifikelele kwinombolo enye kwitshathi ye-Billboard Hot 100 yase-US. UCarey uphumelele amabhaso amahlanu eGrammy, Amabhaso oMculo weHlabathi alishumi elinesithoba, amabhaso alishumi eMusic American, kunye neeBhaso zoMculo zeBillboard ezilishumi elinesine. Uthengise ngaphezulu kwama-albhamu ezigidi ezingama-200 kwihlabathi liphela.
Umculi-umbhali wengoma uMaxwell waba negalelo ekuziseni intshukumo yomphefumlo omtsha ukuba ibalasele kwisiqingatha sokugqibela sama-90s. Emva kokuzenzela igama kwiklabhu yaseNew York, uMaxwell watyikitya ikhontrakthi yokurekhoda kwaye wenza i-albhamu ka-1996 iMaxwell's Urban Hang Suite, awathi wafumana amanqaku okuqala kwiGrammy- nabanye abaninzi ukuba balandele. Emva kwee-albhamu ezintathu kunye neminyaka esixhenxe ye-hiatus, wakhupha i-BLACKsummers'night ka-2009; ufakelo lokuqala lwe-trilogy apho icandelo lesibini, i-BLACKsummers'night, lakhutshwa ngo-2016.
UMichael McDonald wakhulela eMissouri, edlala ngokwamaqela ngaphambi kokuba afudukele eLos Angeles kwii-1970s zakuqala. Ngo-1974 waba lilungu lika-Steely Dan kwaye emva koko wajoyina i-Doobie Brothers. Njengemvumi, ikhibhodi, kunye nomqambi wenza igalelo kwezobuchwephetsha njenge Takin 'It To The Streets, It Keeps You Runnin', kunye naYintoni Isidenge Ekholelwayo. Ngexesha lama-80s kunye nama-90s, umsebenzi wakhe wokuzimela wazi impumelelo njenge-Sweet Freedom kunye neengxoxo ezimbini ezidumileyo: Kwam Own noPatti LaBelle kunye no-Yah Mo B Kukho noJames Ingram. UneeGrmmy ezintlanu kwigama lakhe; I-albhamu yakhe yamva nje iWide Open yakhutshwa ngo-2017.
Ngeentengiso zehlabathi jikelele ezingaphezulu kwezigidi ezingama-75 zeerekhodi, i-saxophonist uKenny G yeyona nto ithengisa kakhulu ukuthengisa ixesha lonke. Ukukhula njengoKenny Gorelick eSeattle's Seward Park, wadibana nesaxophone xa weva intsebenzo kwi-Ed Sullivan Show kwaye waqala ukudlala eneminyaka eyi-10. ukuthengisa icwecwe lesixhobo nanini; Kwiminyaka emibini kamva, icwecwe lakhe leMimangaliso laba lelona cwecwe leKrisimesi lathengiswa kakhulu. UGorelick uyaqhubeka nokhenketho kwihlabathi liphela; icwecwe lakhe lakutshanje, Ubusuku baseBrazil, wakhutshwa ngo-1992.
Umculi-umbhali-mculo waseMelika u-Aloe Blacc waqalisa umsebenzi wakhe ngo-2003, ekugqibeleni wafumana abaphulaphuli abaninzi ngo-2010 engatshatanga Ndifuna idola. Ngo-2013, u-Wake Me Up ongatshatanga, owabhala kunye no-Blacc kwaye wacula no-DJ u-Avicii wase-Sweden, wayengoyena mntu ubethwa kakhulu kumazwe amaninzi. I-albhamu yakhe yesithathu, Phakamisa uMoya wakho, ikwangulo nyaka mnye, kunye ne-EP Ndivuse. Kwangoko kulo nyaka ukhuphe i-single yakhe yamvanje ethi Ndiyavuma; Ukwabonakaliswa kwi-SOS, umntu omtsha ongasekhoyo u-Avicii.
UDavid Sanborn ebeyiphazamisa imida phakathi kweentlobo ukusukela kwiminyaka yoo-1975 kwaye ubonwa njengenye yezona zinempembelelo kwihlabathi liphela. Amandla akhe angapheliyo ahlawule izabelo: USanborn ufumene iirekhodi zegolide ezisibhozo, irekhodi enye yeplatinum kunye neeGrammys ezintandathu. Ukudlala i-sax ukususela ebuntwaneni, uSanborn wakhupha i-albhamu yakhe yokuqala ye-solo ngo-XNUMX; Ukukhupha kule mihla kuthathwa njengento ye-jazz / funk classic.